नेकपाका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : पार्टीमा रहेर पार्टीको समर्थनमा बोल्नै नसक्ने ? (पूर्णपाठ) « Janata Times
नेकपाका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : पार्टीमा रहेर पार्टीको समर्थनमा बोल्नै नसक्ने ? (पूर्णपाठ)
हाम्रै केही मान्छेहरूले व्यक्तिगत आग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत कुण्ठा र विभिन्न कुराले यो देख्न सकिरहेका छैनन । तिनीहरू सबै समाप्त भयो, खत्तम भयोजस्तो पो भन्छन, बोल्छन् र कोलाहल मच्चाइरहेका देखिन्छन् । तिनीहरूका बोली र व्यवहारमा आलोचना र विरोधबाहेक केही छैन ! पार्टीमा रहेर पार्टीको समर्थनमा बोल्न नसक्ने ?
म भन्न चाहन्छु, जसले प्वाल पार्न खोजेपनि यो डुङ्गा प्वाल पार्न दिइँदैन । जसले यो डुङ्गा डुबाउन खोजे पनि यसलाई डुबाउन दिइँदैन । जसले यस डुङ्गालाई उल्ट्याउन खोजे पनि उल्ट्याउन दिइँदैन । जसले यस डुङ्गालाई बीचमै डुबाउन खोजे पनि डुबाउन दिइँदैन